Voadika ny 20 Jolay 2018 3:24 GMT
(Efa nivoaka tamin'ny volana Aprily 2006 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ao anatin'ny krizy ara-toekarena henjana ny Lloyd Aereo Boliviano (LAB), zotra an'habakabaky ny firenena efa nanangonana renivola, izay mety manamarika ny fialan'ain'ny zotra an'habakabaka faharoa ela velona indrindra manerantany. Hatramin'ny taona 1925, mariky ny rehareham-pirenena ny fiaramanidina Boliviana mpitatitra entana, nomena ny anaran'ny tsenan'ny fiantohana Britanika, Lloyd's of London, ary mampiseho endrika fahamarinan-toerana sy filaminana. Tamin'ny tapaky ny taona 1990 teo ambanin'ny politikan'ny fanangonan-drenivola, namidy tamin'ny orinasa tsy miankina ny ampahan'ny renivola ary avy eo indray namidy tamin'ny Boliviana Ernesto Asbún, izay lasibatry ny ahiahy ankehitriny noho ny fitantanana tsy mahomby ao amin'ity orinasa ity.
Hatramin'ny nivarotana ireo renivola ireo, nanomboka niavosa ny trosan'ny LAB, tafakatra teo amin'ny 140 tapitrisa dolara teo. Nilaza ireo mpiasa fa mbola tsy voaloa ny karaman'izy ireo volana maromaro ary tsy mbola nalòa ny fampanantenana ho an'ny fandrotsaham-bola fisotroan-dronono. Vokatr'izany fitarainana izany, nanambara firotsahan'ny fitondram-panjakana an-tsehatra ny governemantan'ny filoha Evo Morales, izay nolazain'ny fitsarana fa tsy ara-dalàna avy eo. Jaime Humerez Seleme avy ao amin'ny Boliviscopio (ES) kosa nanintona ny saina momba ny fiampangan'i Morales ny filohan'ny LAB ho nanome kolikoly ho an'ny fitsarana tamin'izany didy izany miaro azy izany. Na izany aza, tsy mbola nisy ny porofo naseho momba izany.
Diso fanantenana noho izany tsy fahombiazana ny amin'ny tokony hirotsahan'ny governemanta an-tsehatra izany, nanomboka nanao andianà hetsi-panoherana sy fitokonana tsy hihinan-kanina ireo mpiasa mpitokona, izay ahitana mpanamory fiaramanidina sy mpiasa hafa mpanohana. Vetivety dia nihanitombo ny fepetra noraisina satria nibahana ny lalambe tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Jorge Wilstermann tao an-tanànan'i Cochabamba, izay sady foiben'ny LAB ireo vondron'olona tsirairay. Nanatevin-daharana ny hetsika avy eo ireo vondrona hafa, tahaka ny hetsika sendikaly sy ny fikambanana fiarahamonim-pirenena. Teny an-toerana nanadihady ny Mpandrindra ny Rano, Oscar Olivera ny Foiben'ny Demokrasia. Tsy ela dia niditra tao amin'ny lalambe ny manam-pahefana ary nanaparitaka ny vahoaka tamin'ny fampiasana baomba mandatsa-dranomaso, izay nahagaga an'i Olivera raha nilaza izy hoe: “Mandefa baomba mandatsa-dranomaso amin'ireo rahalahiny i Evo.
Fotoana fohy taorian'ny baomba mandatsa-dranomaso, nahazo antso tamin'ny findainy avy amin'ny filoha lefitr'i Bolivia, Alvaro Garcia Linera i Olivera, izay nilaza taminy hoe: “Tsy afaka manakana ny firenena izahay, tsy afaka manakana ny seranam-piaramanidina.” Hoy i Olivera, “Mitovy ihany ireo olona ireo, Evo sy Alvaro, izay talohan'ny [nahalasa governemanta azy ireo] nanohana ny herin'ny vahoaka naneho hevitra teo aloha.
Mety hiteraka fiantraikany goavana ny fanakorontanana ny asan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena mandritra ny 24 ora, hoy ny fanamarihan'i Sebastian Molina. Raha nanoratra tao amin'ny Plan B (ES) izy, ny fahatapahan'ny asa tahaka izany dia hiteraka fahavoazana eo amin'ny sokajy iraisampirenena amin'ny seranam-piaramanidina Boliviana, izay tsy maintsy hanaporofoana fa afaka manohy miasa tsy misy fahatapahana toy izany izy alohan'ny hahazoana indray izany sokajy izany.
Raha manome tsiny mivantana ny Asbún noho ny fitantanana tsy mahomby ny zotram-pitaterana an'habakabaka ny sasany, ny hafa kosa manome tsiny ny rafitra neoliberaly izay nanery fivarotana petrabola tahaka izany ary niteraka vokatra mampiadihevtra tahaka izao. Mihevitra i Sergio Asturizaga fa ny raharaha LAB dia mety ho iray amin'ireo orinasan-drenivola maromaro izay mety hiharan'izany tranga izany koa. Ao amin'ny bilaoginy Así como me ves me tienes (ES), nanome ohatra momba ny orinasan-dalambim-panjakana izy, izay namidy tamin'ny mpandraharaha Shiliana ary dia nitsahatra tsy niasa intsony avy eo.
Humérez Seleme kosa mamintina ny toe-draharaha ankehitriny momba ny zotram-piaramanidina, “Raha tsy misy fahagagana hiseho atsy ho atsy, dia resaka andro na herinandro vitsy fotsiny ny fiafarany tanteraka.”